Wenatchee waxay ku dhowaad $ 1 milyan ku bixisay maalgalinta gobolka ee mashruuca kordhinta McKittrick Street - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Wenatchee waxay ku dhowaad $ 1 milyan ku bixisay maalgalinta gobolka ee mashruuca kordhinta McKittrick Street
Wenatchee waxay ku dhowaad $ 1 milyan ku bixisay maalgalinta gobolka ee mashruuca kordhinta McKittrick Street
Deeqda iyo amaahda Guddiga Dib u soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada waxay taageeri doonaan $ 2.4 milyan oo maalgashi shuraako gaar loo leeyahay, waxay abuureysaa qiyaastii 90 shaqo.
OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) ayaa maanta ansixiyay $ 973,185 maalgelinta horumarinta kaabayaasha dadweynaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka ee Wenatchee, Degmada Chelan.
Deyn $ 859,409 ah iyo $ 113,776 oo la siinayo magaalada Wenatchee waxaa loogu talagalay Mashruuca Kordhinta Wadada McKittrick Street, Maalgelinta Gobolka waxaa lagu abaalmariyay soo iibsiga dariiqa saxda ah iyo qeyb burburinta bakhaarka burburay. Inta hartay bakhaarka waxaa isticmaali doona mashruuca lammaanaha gaarka loo leeyahay, Diamond Foundry, LLC. Shirkaddu waxay maalgalin doontaa $ 2,400,000, iyada oo abuureysa 96 shaqo, mashruucan dartiis. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 243,296 ilaha gudaha.
“Mashaariicda CERB waxay matalayaan iskaashi muhiim ah oo udhaxeeya gobolka iyo bulshada maxalliga ah taasoo dhalisay kor uqaadida muhiimadda dhaqaale. Mashruucani wuxuu matalayaa baahinta baahsan ee warshadaha ee miyiga miyiga gobolkayaga. Guddigu wuxuu ku faraxsan yahay inuu la shaqeeyo Magaalada Wenatchee si loo abuuro shaqooyin joogto ah oo gaar loo leeyahay qoysaska Washington, ”ayuu yiri Guddoomiyaha CERB Randy Hayden.
"Maalgashiga gobolka ee kaabayaasha guud waxay xoojinayaan bulshooyinka miyiga iyagoo ka caawinaya iyaga inay soo jiitaan oo ay sii hayaan shaqo-bixiyeyaasha shaqo abuurka leh," ayuu yiri Brian Bonlender, oo ah agaasimaha Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington. “Dowlado badan oo maxalli ah ayaa la halgamaya hagaajinta iyo dayactirka xarumaha u oggolaanaya kobaca dhaqaalaha. Qalabyada sida barnaamijka wadajirka ah ee gaarka loo leeyahay ee CERB ayaa muhiim u ah suurtagelinta maalgelinta lagama maarmaanka ah. ”
Siideynta lacagaha CERB ee mashruucan waxay kuxirantahay codsadaha oo dhameystira shuruudaha qandaraaska kahor, sida dhameystirka ilaha kale ee maalgalinta iyo helitaanka rukhsadaha lagama maarmaanka ah.
Falanqeynta CERB-da 2015 -17 Biennium dib u eegis oo iska hubi CERB-ta khariidadda mashruuca is-dhexgalka loogu talagalay mashaariicda la ansixiyay 2015-17.
Laga soo bilaabo 1982, CERB waxay ku dhowaad $ 176 milyan u goysay maamullada maxalliga ah ee gobolka oo dhan, maalgashi abuuraya in ka badan 35,000 oo shaqo, iyo maal-gashiga raasumaalka gaarka loo leeyahay oo ah $ 5.6 bilyan ($ 34 ilaa $ 1) oo ku soo noqoshada maalgashiga CERB.
Maaddaama ay tahay ilaha istiraatiijiga ah ee horumarinta dhaqaalaha Washington, CERB waxay diiradda saareysaa abuurista shaqooyinka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyadoo lala kaashanayo dowladaha hoose iyadoo maalgelinaysa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Horumarintani waxay dhiirigalineysaa horumarinta ganacsiga cusub iyo ballaarinta. Marka lagu daro maalgelinta mashaariicda dhismaha, CERB waxay siisaa maalgelin xadidan daraasadaha qiimeeya mudnaanta sare leh mashaariicda horumarinta dhaqaalaha. Ka baro wax badan oo ku saabsan CERB barta www.commerce.wa.gov/cerb.
FARXADguddiga dib u soo nooleynta dhaqaalaha bulshadaDeeqaha bulshada iyo amaahdahorumarinta dhaqaalahaWar-saxaafadeed
← Wafdiga gobolka Washington waxay ku soo bandhigayaan MEDICA magaalada Dusseldorf, Jarmalka toddobaadkan GreenRubino si loo horumariyo qorshaha suuqgeynta dalxiiska cusub ee gobolka Washington →